Nijoro ny Sampana Lehilahy Kristiana – 13 mey 2007 – FJKM Ambavahadimitafo Nijoro ny Sampana Lehilahy Kristiana – 13 mey 2007 |
Nijoro ny Sampana Lehilahy Kristiana – 13 mey 2007
Publié le 14 juillet 2007 à 08:07
Resadresaka nifanaovana tamin’ny Filohan’ny SLK (Sampana Lehilahy Kristiana)Ambavahadimitafo,RAVELOJAONA Feno Niriana
Hoviana no niforona ny SLK (Sampana Lehilahy Kristiana)?
Tamin’ny taona 1982 no niforona ny SLK teo amin’ny sahan’ny FJKM manerana an’i Madagasikara. Fa ny SLK eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo dia tafajoro androany; androany 13 mey 2007. Fa mbola mijoro fotsony izany, tsy mbola tena ara-dalàna eo anivon’ny FJKM; fa amin’ny erintaona ohatran’izao vao tena hajoro ho ara-dalàna. Izahay izay mijoro izao izany dia, karazan’ny hoe manao « test » raha hahavita ny asa na tsy hahavita.
Inona moa izany no tena atao hoe SLK?
Ny atao hoe SLK izany dia sampana velona anankiray eo anivon’ny FJKM, Sampana Lehilahy Kristiana izay mijoro hanatanteraka ny asam-piangonana izay hanirahana na niantsoan’Andriamanitra azy. Ny tanjona sy ny zavatra kendren’ny SLK ary ny andrasana aminy dia :
– ny hahatonga ny lehilahy kristiana hiroso lalindalina kokoa amin’ny finoana
– hazoto amin’ny asam-piangonana
– hahatana ny adidy amin’ny maha-loham-pianakaviana
– fiomanana ihany koa ho an’ireo izay ho loham-pianakaviana; amin’ny fitiavana sy risim-po no hanatanterahana izany.
– miaina ny hafatr’i Kristy eo anivon’ny firenena arakaraka ny asa tandrify ny tsirairay, na eo amin’ny firenena na ankohonana na eo amin’ny fiaraha-monina
Eo amin’ny firy ny isan’ny mpikambana ao amin’ny SLK?
Ny mpikambana ao amin’ny SLK izany izao dia misy eo amin’ny 40 lehilahy eo ho eo.
Inona no mampihavaka ny SLK amin’ny sampana hafa?
Ny mampiavaka azy dia; hoe izany izy hoe lehilahy, lehilahy kristiana. Ny mampiavaka azy koa faharoa dia angamba ny fijoroany tao anatin’ny fotoana fohy nefa efa nahazoana sahady mpikambana 40. Ankehitriny tsy hafenina fa sarotra dia sarotra tokoa ny manangana fikambanana sy mitady olona hihiditra ao anatiny. Fa mino sy manantena fa mbola ho avy ireo mpanampy hiasa mavitrika ao anatin’izany sampana izany. Ary dia tsy hitoky teny fatratra aho fa aleo ny fotoana no hitsara na mihavaka tokoa ireo lehilahy kristiana eto Ambavahadimitafo na tsy mihavaka.
Fanentanana ny lehilahy eto am-piangonana hanatevin-daharana ny SLK?
Miantso mandrakariva izany izahay; dia manentana ny lehilahy rehetra tsy an-kanavaka izay mahatsiaro tena ho lehilahy, hiditra ao anatin’ny Sampana Lehilahy Kristiana. Ary tsy hanatevin-daharana, amin’ilay niantsoinao azy teo, fa tena hiditra ho isan’ny laharana; satria mantsy ny manatevin-daharana izany dia mety tsy hiasa izany, fa hanabe isa fotsiny fa tena hiasa tokoa moa izany ho an’i Kristy.
Hafatra kely ho an’ny mpiangona na ny lehilahy eto am-piangonana na ho an’ireo mpitsidika ny « site web »?
Voalohany indrindra aloha ho an’ny lehilahy eto am-piangonana dia manentana hatrany hazoto hanompo an’Andriamanitra, hankato ny hafatra izay ampitain’i Jesoa Kristy ary hitory ny teny amin’ny olona rehetra. Ary dia hazoto hanatanteraka izany na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana. Manaraka izany ho an’ny mpijery ny site web-n’ny FJKM Ambavahadimitafo satria efa hery lehibe ho an’ny fiangonana izany amin’ny fampandrosoana ny asa : dia manentana antsika na ny eto an-toerana na ny any am-pitan-dranomasina any, amin’ny fampandrosoana hatrany araka izay mety ho tandrify azonareo atao. Miara-miasa isika satria dia mpirahalahy ao amin’ny Tompo.